कसरी आएका थिए स्व.मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी राजनितिमा ? कसरी बने मन्त्री ? यस्तो छ उनको जीवनी…(हेर्नुहोस् भिडियो) – PathivaraOnline
Home > समाचार > कसरी आएका थिए स्व.मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी राजनितिमा ? कसरी बने मन्त्री ? यस्तो छ उनको जीवनी…(हेर्नुहोस् भिडियो)
ताप्लेजुङमा भएको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीसहित ७ जनाको मृत्यु भएको छ । AS350 हेलिकोप्टर दुर्घटनामा मन्त्रीको निधन भएको सत्तारुढ नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले पुष्टि गरे ।
तेह्रथुमको चुहान डाँडा एयरपोर्ट निरीक्षणपछि मन्त्री अधिकारीसहितको टोली पाथीभरा दर्शनमा लागि गएको थियो । त्यहाँबाट फर्कने क्रममा दुर्घटनामा परेका हुन् । घटनास्थलमा रहेका स्थानीयबासीका अनुसार हेलिकोप्टर टुक्राटुक्रा भएको छ र आगो बलिरहेको छ । कसरी आएका थिए स्व.मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी राजनितिमा ? कसरी बने मन्त्री ? यस्तो छ उनको जीवनी…हेर्नुहोस् भिडियो….